ငယ်ငယ်ကတည်းကဆေးလိပ်စွဲနေပြီဆိုရင်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ငယ်ငယ်ကတည်းကဆေးလိပ်စွဲနေပြီဆိုရင်….
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 29, 2010 in Health & Fitness |3comments
အသက် ၁၇ နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆေးလိပ်စသောက်သူတွေဟာ Multiple Sclerosis(MS) ရောဂါဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအရမ်းများတယ်လို့ အမေရိကန်ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောအကယ်ဒမီရဲ့၆၁ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ MS ရောဂါဟာ လူငယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတဲ့ နာတာရှည်အာရုံကြောထိခိုက်တဲ့ရော
ဂါတစ်မျိုးပါ။ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနဲ့ဦးနှောက်မှာ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ myelin sheath လို့ ခေါ်တဲ့ အဆီလွှာလေးပျက်စီးပြီး အာရုံကြောတွေအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံကြောစနစ်ရဲ့ နေရာစုံမှာ ထိခိုက်တဲ့အတွက် ရောဂါလက္ခဏာတွေကလည်းအမျိုးစုံပြီးပြင်းထန်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်ပုံပျက်နေခြင်း၊ခြေတွေလက်တွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေခြင်း၊ မျက်လုံးအကြောသေခြင်း၊ စကားမပီမသဖြစ်လာခြင်း၊ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း၊အမြင်အာရုံကြောယောင်ရမ်းခြင်း စတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားရတတ်တဲ့ ရောဂါမျိုးဖြစ်လို့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီရောဂါရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှေးယခင်က သေချာစွာ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် လူ ၃၀,၀၀၀ ကျော်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ ဒီတွေ့ ရှိချက်အရ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။
ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက လူတွေအားလုံးကို ဆေးလိပ်မသောက်သူများ ၊ အသက်၁၇ နှစ်မတိုင်ခင်ဆေးလိပ်သောက်သူများနဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်နောက်ပိုင်းမှဆေးလိပ်သောက်သူများဆိုပြီး ၃ စုခွဲပြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အခြားအချက်တွေဖြစ်တဲ့ အသက်၊ လိင်၊ လူမျိုး၊ နေထိုင်ပုံ စတာတွေကြောင့် ရလဒ်တွေ ကွဲလွဲမှာစိုးလို့အုပ်စုတစ်စုချင်းစီမှာ လူစုံပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ အဖြေကတော့ ဆေးလိပ်ကို စောစောသောက်သူတွေဟာ ဆေးလိပ်လုံးဝမသောက်သူတွေထက် Multiple Sclerosis ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၃ ဆ ပိုများနေတာ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ သောက်သူတွေမှာလည်း အန္တရာယ်ရှိပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းကစသောက်သူတွေဟာ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးဖြစ်တာမို့မက်ဖန်ပရိသတ်ကြီး အတွက် သတိထားရှောင်ကြဉ်ဖွယ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Yin Nyine Nway has written 356 post in this Website..
ကျနော် ဆေးလိပ်သောက်တတ်ပါတယ် …ဆေးလိပ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက် ကို ဆေးလိပ်မသောက်ဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်တော့မယ် …..:)
ကျနော်ကတော့ ဘယ်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ်မသောက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။
သောက်တာနဲ့မသောက်တာ ဘာကွာသလဲလို့ ယှဉ်ကြည့်တော့။
1။ အာခံတွင်းက မကောင်းတဲ့အနံ့အသက်တွေပျောက်သွားတယ်။(အရင်ကအိပ်လို့ကျလာတဲ့သွားရည်ကိုကနံတယ်)
3။သီချင်းဆိုရင် အရင်ကထက် အသံကို ရှည်အောင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ဆိုနိုင်လာတယ်။
5။အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူး(အရင်က အပြင်သွားခါနီးရင် မီးခြစ်စီးကရက်ဘူး မပါရင် အပြင်ထွက်ရတာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုဘဲ)
Gong Zhu says:
ဆေးလိပ်မသောက်လည်း အငွေ့ရှုမိရင်လည်း ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်ဆို ? ? ?